Lezienụ anya na fatịlaịza organic
site ha na 2021-07-21
Mmepe nke oru ugbo na-aghaghi ibu uzo dozie nsogbu nke mmetuta ala. Nsogbu ndị a na-ahụkarị na ala gụnyere: nchịkọta ala, ahaghị nhata nke ihe ndị na-edozi ahụ, ihe dị ala dị ala, usoro ọrụ ugbo na-emighị emi, ala acidification, salinization ala, mmetọ ala na ihe ndị ọzọ. Iji mee t ...
Gịnị bụ ụdị nke onyinye fatịlaịza
site ha na 2021-07-15
Ngwakọta fatịlaịza na-ezo aka na ọ dịkarịa ala abụọ n'ime atọ nri nitrogen, site na potassium. Ọ bụ fatịlaịza kemịkal sitere na usoro kemịkalụ ma ọ bụ usoro anụ ahụ na ụzọ agwakọta. Nitrogen, phosphorus, na potassium usoro ntinye aha ọdịnaya: nitrogen (N) site na (P ...
Ntinye nke igwe igwe igwe igwe juputara buru ibu
site ha na 2021-07-05
Wheel Type Composting Turner Machine bụ akpaka composting na gbaa ụka akụrụngwa na ogologo na-adịru na ogbu nke anụ ụlọ nri, sludge na ahihia, filtration apịtị, usụhọde slag achịcha na ahịhịa sawdust na sugar igwe, na-na-ọtụtụ-eji gbaa ụka na akpịrị ịkpọ nkụ na organic. ..
Nhazi usoro fatịlaịza
Onyinye fatịlaịza, nke a makwaara dị ka fatịlaịza kemịkalụ, na-ezo aka fatịlaịza nwere nri abụọ ma ọ bụ atọ nke ihe ọkụkụ na-edozi ahịlị nitrogen, site na potassium na-arụpụta site na mmeghachi omume kemịkal ma ọ bụ usoro ịgwakọta; fatịlaịza fatịlaịza nwere ike ịbụ ntụ ntụ ma ọ bụ granular. Ngwakọta fatịlaịza ...
Ngwa mmeputa zuru ezu maka fatịlaịza organic
The zuru set nke organic fatịlaịza mmepụta ngwá n'ozuzu na-agụnye: gbaa ụka ngwá, agwakọta akụrụngwa, ndinuak akụrụngwa, granulation akụrụngwa, ihicha akụrụngwa, jụrụ akụrụngwa, fatịlaịza screening akụrụngwa, nkwakọ akụrụngwa, wdg
Ezi nri organic fatịlaịza zuru ezu akụrụngwa
Nhọrọ nke ngwaọrụ maka nri fatịlaịza fatịlaịza na fatịlaịza bio-organic nwere ike ịbụ nri anụ ụlọ dị iche iche na mkpofu ahịhịa. Basickpụrụ bụ isi maka mmepụta dịgasị iche dabere na ụdị na akụrụngwa. Ngwakọta zuru ezu nke nri nri fatịlaịza na-ejikarị ...
Organic fatịlaịza mmepụta akara akụrụngwa
site ha na 2021-06-29
Nhọrọ nke ngwaọrụ maka fatịlaịza organic na fatịlaịza na-emepụta ihe nwere ike ịbụ nri anụ ụlọ dị iche iche na mkpofu ahịhịa. Basickpụrụ bụ isi maka mmepụta dịgasị iche dabere na ụdị na akụrụngwa.
Usoro mmepụta fatịlaịza Organic
Nhọrọ nke ngwaọrụ maka fatịlaịza organic na fatịlaịza na-emepụta ihe nwere ike ịbụ nri anụ ụlọ dị iche iche na mkpofu ahịhịa. Basickpụrụ bụ isi maka mmepụta dịgasị iche dabere na ụdị na akụrụngwa. Ihe ndi ozo bu: nsị anụ ọkụkọ, nsị ọbọgwụ, ọgazị nri, nri ala, catt ...
Gbaa ụka technology nke ọkụkọ nri organic fatịlaịza
site ha na 2021-05-25
Enwekwara ọtụtụ na nnukwu ugbo pere mpe. Mgbe ha na egbo mkpa ndi mmadu, ha na emeputa otutu anu ulo na ulo ozuzu okuko. Usoro ezi uche dị na ya nke nsị nwere ike ọ bụghị naanị na-edozi nsogbu nke mmetọ gburugburu ebe obibi, kamakwa ịtụfu. Weibao site na ...
Atụrụ nri fatịlaịza teknụzụ gbaa ụka
site ha na 2021-05-18
Atụmatụ mmepụta nke fatịlaịza organic
Ọrụ azụmaahịa a na-enweta ugbu a nke fatịlaịza organic abụghị naanị na uru akụ na ụba, kamakwa n'usoro nduzi nke atumatu gburugburu ebe obibi na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ihe kpatara oru ngo fatịlaịza organic Isi mmalite nke mmetọ gburugburu ebe obibi: ...
Fermentation Technology nke Cow nsị Organic Fatịlaịza